I-Chili Piper: Ukuphinda ubambe iQela lokuThengisa, uKhalenda, kunye ne-Inbox | Martech Zone
I-Chili Piper: Ukuphinda wenze into yokuCwangciswa kweQela lakho lokuThengisa, iKhalenda, kunye ne-Inbox
NgoMvulo, Novemba 23, 2020 NgoMvulo, Novemba 23, 2020 Douglas Karr
Chili Piper Isisombululo sokucwangcisa esizenzekelayo esikuvumela ukuba ufaneleke ngokukhawuleza, indlela, kunye neentlanganiso zokuthengisa ngeencwadi ezingenayo zikhokelela kumzuzu wokuguqula kwiwebhusayithi yakho.
IChili Piper inceda njani amaqela okuthengisa
Akusekho kuphazamiseka ukusasaza ispredishithi, akusekho kubuya ngapha nangapha ii-imeyile kunye nee-voicemails ukubhukisha intlanganiso, kwaye akusekho mathuba alahlekileyo ngenxa yokulandela kancinci kancinci.
Chili Piper Iimpawu zibandakanya
I-Chili Piper ibonelela ngethemba lakho ngamava angcono okucwangcisela wonke umntu ojika ngakumbi akhokele kwiintlanganiso ezifanelekileyo.
Ukudibanisa kwangoko kunye nezikhokelo ezingenayo -Concierge ikuvumela ukuba ucwangcise iintlanganiso okanye uqalise iifowuni kwangoko emva kokungenisa ifom yewebhu. Yithi ndlela-ntle kumathuba okuthengisa aphosiweyo. Phinda kabini isantya sakho sokukhokela ngokudibanisa ii-reps nabathengi abaqeqeshiweyo ngalo mzuzu bethe bangenisa kwifom yakho yewebhu.
Iintlanganiso zencwadi naphi na apho usebenza khona -Nencwadi ekhawulezileyo yeNcwadi yakho, abaphengululi bakho banokubhukisha iintlanganiso kunye neefowuni ze-handoff kwimizuzwana ngaphandle kokutshintsha izikrini.
Ukucofa okukodwa kwi-imeyile -Nciphisa ukucofa kunye nokucwangcisa iintlanganiso ngokukhawuleza. Shumisa ukufumaneka kwakho ngqo kwi-imeyile yakho kwaye ubenamathuba encwadi ngonqakrazo olunye.
Iifowuni zexesha lokwenyani kunye nengxoxo yevidiyo- Akukho sikhombisi sibhetele sokukhokelela kushushu kunomntu okulungeleyo ukuthetha ngoku. Nika ithuba lokukhetha ukuqala kwefowuni okanye ividiyo kwiwebhusayithi yakho.
Hambisa iintlanganiso kummeli ochanekileyo ngexesha langempela- Ngomzila okrelekrele, iintlanganiso zicwangciswa ngokuzenzekelayo nelungu elifanelekileyo leqela lakho lokuthengisa, likuvumela ukuba usasaze isikhokelo ngokufanelekileyo kwaye ususe i-spreadsheet.
Ukufaneleka, indlela, kunye nencwadi ngonqakrazo olunye - Ukuhamba ngendlela ekhokelayo kuqinisekisa ukuba amathemba afanelekileyo acwangcisiwe ngokuphendula ngokuchanekileyo ngexesha langempela. Sebenzisa ulwazi oluqokelelwe kwifom yakho yewebhu ukuze ufumane izikhokelo ezingenayo ngexesha langempela kwaye uzihambise kwindawo efanelekileyo yokuthengisa.
Ukujikeleza irobin -Ukuqinisekisa ulwabiwo olufanelekileyo lokuhamba ngokuhamba ngebhayisikile ngokuzenzekelayo liqela labathengisi abathengisayo nanini na xa kubhukishwe intlanganiso entsha.
Rekhoda lonke unxibelelwano kwi-Salesforce - I-Chili Piper ilungisa ngokuzenzekelayo imicimbi kwi-Salesforce. Onke amanqaku, iishedyuli, kunye neenkcukacha zentlanganiso zinexesha lesitampu kwaye zirekhodwa ukukunceda ulawule ngcono umbhobho wakho.
Ukulinganisa nokwandisa amaxabiso okuguqula iintlanganiso -Landa umkhondo onke amanqanaba enkqubo yentlanganiso, kubandakanya ukubhukisha, iintlanganiso ezibanjiweyo, akukho mboniso, iishedyuli kunye nokucinywa. Yakha iingxelo kwi-Salesforce ukuze uqonde ngcono kwaye wandise uguquko lwangaphakathi olungena ngaphakathi.
Chili Piper idityaniswa nentengiso oyithandayo kunye nesoftware yokuthengisa esizenzekelayo- kubandakanya iSalesforce Pardot, Hubspot, Marketo, Salesforce, Eloqua, Twilio, Zapier, Intercom, GoToMeeting, kunye Zoom.
Bhalisela iChili Piper Simahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le Chili Piper.
tags: umbulali wesililieloquahubspotintercomuphawuikhalenda yokuthengisarekhoda yokuthengisa umnxebaukuthengisa ukurekhodwa komnxebaUkucwangciswa kwentlanganiso yokuthengisaiintlanganiso zentengisoIndlela yokuthengisaingxoxo yevidiyo yokuthengisaukuthengisaukuthengisa uxoleloTwiliozapperyenza nkulu
Uyidlulisa njani kwaye uyigcina njani i-ID yoQhagamshelo lweSalesforce kunye neFom yeGrivity kunye neWordPress